दुनियाकै कुरुप महिलाको दर्दनाक कथा, कसरी बदलिन् शोकलाई शक्तिमा ? – shubhabihani
Home / बिचित्र संसार / दुनियाकै कुरुप महिलाको दर्दनाक कथा, कसरी बदलिन् शोकलाई शक्तिमा ?
Posted by: admin in बिचित्र संसार October 21, 2015	Comments 434 Views
Previous: सूनसरी र कैलाली ,किन चाहन्छ भारत ?
Next: रुसी ह्याकरले बनाए हत्यारा पेनड्राइभ, जसले खरानी बनाइदिन्छ टिभी र कम्प्युटर
यास्मिन (नाम परिवर्तन) निकै भाबुक देखिन्छन् । उनी आफ्नो नङ दाँतले लगातार टोकिरहेकी छिन् अनि ...